Afhayeenka Waddani oo dilalka Laascaanood dusha u saaray Xukuumadda | Berberanews.com
Home WARARKA Afhayeenka Waddani oo dilalka Laascaanood dusha u saaray Xukuumadda
Hargeysa-Berberanews)-Xoghayaha guud ee xisbiga Waddani Khadar Xuseen Cabdi, ayaa xukuumada Somaliland ku eedeeyay in anay daacad ka ahayn sugida amaanka magaalada Laascaanood.
Xoghayeha ayaa sheegay in wasiir Maxammed Kaahin oo xukuumada u qaabilsan amaanka uu safar ku tagay gobolada galbeed ee Somaliland, isagoo sheegay in looga baahnaa in uu tago gobolka Sool oo uu u kuur galo xaalada amaan ee gobolka.
“Wasiir keena arrimaha gudaha hadii ay dhab ka tahay jacaylka reer Laascaanood Borama iyo Gabilay kamuu soo dhaanteeyeen maydkii Laascaanood oo yaala, wuu la xanuunsan lahaa wuu u tagi lahaa, mushkilada jirta ayuu soo eegi lahaa” ayuu yidhi xogeeyuhu.
“Intaan xogta ku hayno majirto war ay xukuumadu kasoo saartay mushkiladaha Laascaanood ka dhac dhacaya, shalay oo ugu danbaysay guddi ay reer Laascaanood samaysteen ayay xukuumadu guddi kaga jawaabtay, markaa xukuumada wexeedu ma jawaab uun baa” ayuu hadalkiisa ku daray.
” Madaxweyne aan magaalooyinkiisa qaar u hoyan kareynin , sheekooyin badan ayaa lay-nooga sheekeeyay berigii ololaha , Muuse waa Geesiyo , muuse waa nin adagoo , waxaan islahaa markuu sanad joogo Buuhoodlu u hoyan doonaa , balse 4 sanno oo uu joogay habeen Laascaanood umuu hoyan madaxweynuhu , Saleebaan Cali Kooraan islahaa wuxuu ku odhan doonaa kaalay madaxweyne Laascaanood nalasoo seexo , Gabiley iyo ilay Laascaanoodba madaxweynaad u tahaye “.
” Wasiirka Warfaafinta ( Koore) waxaan is idhaahdaa malaa hor-boodka Muuse iyo sawirada uu la galaayo ayaa ku filan , waayo maanta wuxu joogi laha Laascaanod oo waxa bulshadiisa ku dhacaya ayuu wax kasoo ogaan lahaa “.Xoghaye Khadar Hussein Abdi .
Xukuumada Somaliland ayaa guddi wasiiro ah u magacowday u kuur galista xaalada amaan daro ee ka jirta gobolka Sool ee bariga Somaliland, iyadoo dilal is xig xigay dablay aan haybtooda la aqoonsan ugu gaysteen masuuliyiin xukuumada iyo xisbiyada mucaaradka ka tirsan.
Previous articleDowladda Djibouti oo dalkeeda ku xannibtay Fahad Yaasiin